jacaylka | ISKU SOO DHAWEEYAHA BULSHADA SOOMAALIYEED
WAA MAAMULAHA WEBKA OO GACMO FURAN KUGU SOO DHAWEENAYA
ISKU SOO DHAWEEYAHA BULSHADA SOOMAALIYEED
Saturday, August 7th, 2010 posto by xanafi
Maadaama ay jiraan akhristayaal badan oo ku xiriirsan Ladaneey, joogana meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah ayaa waxa ay na soo waydiiyaan talooyin. Talooyinka oo aanu uga jawaabno sida ugu wanaagsan ee aan u aragno in akhristaha su’aasha leh uu ku faa’iidayo. Talooyinka ayaa waxa aan kala tashanaa aqoonyahano khibrad u leh su’aalaha nala soo waydiiyo.
Hadaba dooda jacaylka ayaa ah mid aan u aragnay in ay firkadahooda ka soo dhiibtaan sidii ay u caawin lahaayeen gabadh na soo waydiisay talo.
Gabadha ayaa waxa ay u baahan tahay sidii looga caawin lahaa in ay kala doorato laba wiil. Labada wiill ayaa mid waliba waxa uu u sheegay gabadha in uu jecel yahay. Wiil kastana waxa uu u soo bandhigay inta uu leegyahay jacaylka uu u qabo gabadhan.
Wiilka kowaad ayaa waxa uu ku yiri gabadha, ” Waan ku jeclahay sababtoo ah waan kuu dhimanayaa”.
Willka labaad ayaa waxa uu ku yidhi gabadha, “Waan kuu dhimanayaa sabatoo ah waan ku jeclahay”
Gabadha ayaa kala saari wayday labada wiil ka ay u malaynayso in uu aad u jecel yahay.
Aanaga oo u aragnay in ay tahay arin aad u adag ayaa waxa aan u soo bandhigaynaa akhristayaasha Ladaneey in ay nagala qayb qaataan sidii aan gabadhan u caawin lahayn.
Hadaba wiilkee ayaad u malaynaysaan in uu gabadha aad u jecel yahay? Iyo sababta aad u malaynaysaan inn uu yahay ka sida dhabta ah u jecel?
Ka dhiibo rayigaaga!
Halkan hoose waxa ka furan meesha aad ku soo qori kartaan fikirkiina!
5 arimood ha kudhihin lamaanahaaga
Hore ayay soomaalidu u tiri, “nin iyo naag colna maaha nabadna maaha” taas oo aan u soo kordhinayn qoyska wax faa’iido ah. Waxa ka haboon in lamaanuhu is ixtiraamaan, is caawiyaan, is aaminaan oo is xanaaneeyaan. Waxa kale oo muhiim ah in uu mid kastaa ka fikiro waxa uu ku dhahayo lamaanahiisa. Waxa jira erayo ama hadal duminaya reerka dhisan. Hadalkaas oo marnaba u fiicnayn jacaylka ka dhex jira labada nolosha wadaagaya.
Waxa khuburada ku takhasusay guurka ee la yiraa Charles iyo Elizabeth Schmithz, qorayna buuga “Building a love that lasts.” ay dhawaan ku qoreen maqaal shabakada Psychologytoday,com. Maqaalkaas oo uu nuxurkiisu ahaa in lamaanuhu ogaadaan in sida ay ugu wanaagsan tahay qoyska in si wanaagsan la isula hadlaa ay ayaduna u fiican tahay qoyska in aan si xun la isluu hadal
Hadba waxa Ladaneey idiin soo bandhigaysaa 5 arimood ee si fudud u jabin kara xiriirka lamaanaha. Kuwaas oo kala ah:
1 – Waa qaladkaaga
Adiga oo markasta qaladka kor ka saara lamaanahaaga ayaa waxa ay dhalinaysaa in aad kala fogaataan iyo is aaminid la’aan. Kuna bedela taas idinka oo isu soo dhawaada oo noqda sidii koox oo kale.
2 – Maxaad markasta sidaa u samaysaa
Adiga oo markasta fiirinaya meesha uu ka liito lamaanahaagu kor uma qaadayso xiriirkiina. Ama adiga ha ahaato ama ayada ha ahaato,e waxa qofka markasta sidaas loola hadlaa dareemayaa in laga dabashaqaynayo oo waxa sii badanaya qaladkiisa. Iskuna daya in aad kor u sii qaadaan waxa uu ku fiican yahay mid kasta.
3 – Miyaanan sidaas hore kuugu sheegin
Ha ka sii xanaajin lamaanahaaga aad hore isu qabateen, qalad kaa tirsanaya ama aad hore u canaanatay. Markaa waxa haboon in aanad tusin in aad arintaa meesha taala aad adigu ku saxsanayd.
4 – Ha ka codsan in uu kuu sheego talo hadana ha samayn wax ka soo horjeeda talada
Arintani waxa ay ku salaysan tahay ixtirmaaka. Marka aad waydiisid lamaanahaaga waxa uu ka qabo arin ama talo, kadibna aad samaysid mid ka soo hor jeeda taladii ama fikirkii uu kuu sheegay ayaa waxa ay tahay ixtirmaad daro.
5 – Ha isku cambaaraynina dadka hortiisa
Arintanina waa mid aad u xun. Hadii aad isqabtaan la taga murankiina iyo qayladiina guriga oo halkaas ku xaliya. Laakiin marka aad isku hor qabsataan oo isku hor cambaaraysaan dad kale hortiis ayaa waxa ay keenasysaa dhaacaw aan waligii bogsan iyo nacayb aad isu qaadaan
pics from: xanafi2010@hotmail.com
SIDEE KU OGAAN KARTAA GABADHA SIDA DHABTA KUU JECECL?
Run ahaantii jacaylku waa tartan qarsoon oo ogaanshihiisu ay wakhti qaadato, mana fududa marka u horaysa in la dareemo gabadh ku jecel sida ay u fududahay in aad dareento waxyaabaha kale, Had iyo jeer dadka uu jacaylku la soo darso rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee si daacad ah ugama run sheegaan, ku dhiirashada inay si badheedh leh ugu soo bandhigaan jacaylka ay u hayaan qofka sida dhabta ah ay jeclaadeen, waxaanay inta badan la soo dersa dareen baqdin iyo cabsi leh, iyaga oo ka cabsi qaba haddii ay u soo bandhigaan shaqsiga ay jecel yihiin in lagu gacmo saydho oo ay la kulmayaan waji gabax.
Waxaanad niyaddada ku haysaa in qofka sida dhabta ah jacaylku qaba aanu sinaba kuugu soo bandhigi karin ragga iyo dumar kuu doonaba ha ahaadee waayo maahmaah english ah ayaa tidhaahda “True Lover Don’t Say Love Each Other,But They Know They Do” oo ay macnaheedu tahay labada qof ee sida dhabta ah sku jeceli lagamaba yaabo inuu ku yidhaado waan ku jecelahay midba midka kale balse wey ogyihiin waxaa ka dhexeeya waxanay isku dareensiiyaan waa ficilo aad ka garan karto qofka sida dhabta ah kuu jecel (action).
Sidaa awgeed haddii aanu sii ogayn qofka wax jeceli jawaabta uu kala kulmi doono qofka uu jeclyahay, marka uu jacaylkiisa u sheegan waayo ayaa waxaa ay ku kaliftaa qofkaasi amaba sabab u ah in qofkaasi uu qarsado jacaylkiisa taas oo khataro caafimaad oo nafsaani ah ku keenta qofka wax jecel.
Waxa jira dad uu ka xoog bato dareenka qiirada leh ee jacayku oo si fududna looga fahmi karo rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee. Si kastaba ha ahaatee waxa jira dhaqamo iyo caadooyin badan oo u diidaya gabadha ceebna ku ah in ay si fudud ugu soo bandhigto wiilka ay jeceshahay jacaylkeeda iyo waxyaabaha ka dhabta ah ee ay ku dooratay amaba dareenkeeda nafahaaneed.
Waxa kale oo jira dhaqamo iyo caadooyin u fasaxaya gabadha in ay ku dhiirato sidii ay ugu soo bandhigi lahayd, Tusaale ahaan gabdhaha ku nool qurbaha oo kale ceeb kuma ah in ay tidhaahdo “Hebeloow waan ku jecelahay”. Sidaa daraadeed ragga way ku adagtahay in ay ogaadaana gabadha aadka u jecel, maxaa yeelay dumarku uma qirtaan jacaylku sida uu yahay, xitaa haddii uu ka dhab yahay. Sidaa awgeed waxa jira waxyaabo badan oo uu ninku si fudud uga fahmi karo gabadha aadka u jecel waxeyna kala yihiin qodobadaasi.
Isagoo ninku isbarbar dhig ku sameeya oo qiimeeyna ku sameeya hab dhaqanka ay gabadhu dadka ula dhaqanto iyo sida ay adiga kugula dhaqanto. Haddii aad gabadha ka dareento in ay ku siinayso tixgelin ka badan ta ay dadka kale siiso gabadhaasi way ku jeceshahay ee sidaasi ku ogow. Dumarka qaar ayaa aad uga werwera badbaadada qofka ay jecel yihiin, sidaa daraadeed haddii gabadhu ay aad xil isaga saarto in ay ogaato halka aad joogto iyo waxa aad ku sugan tahay iyada oo ku waydiinaysa dad xog ogaal kuu ah, gabadhaasi way ku jeceshahay.
Haddii gabadha ku jecel aad ku aragto hinaase waxa lagu sifeeyaa aragtida noocaasi ah in ay ku jeceshahay, maxaa yeelay hinaasaha laftiisu waxaa uu qayb laxaad leh ka qaadtaa jacaylka dhabta ah ee ay hayso haweeneydaasi. Gabadha ku jecel ee aan kuu soo bandhigin jacaylkeeda waxa ku abuurma dareen baqdin leh, waxaanay had iyo jeer ka werwertaa in ay waydo ninka ay jeceshahay oo uu raaco gabadh kale oo aan iyada ahayn. Hadaba haddii aad ka dareento gabadha aad wada sheekeysataan amaba walaltinimo idinka dhexeyso hadii aad ku aragto astaamahan waxa lagaaga baahan yahay in aanad lumin jaaniskaasi oo aanad dayacin jacaylkeeda ee aad ka faa’iidaysato fursada qaaliga ah. Astaamahan aad aragtay Run ahaantii waxa aad si fudud u soo jiidan kartaa una ogaan kartaa, kasban kartaana qalbiga gabadha ku jecel.
Adgoo Isku daya marka aad si dhab ah oo aan dheel-dheeli ku jirin aad u hubiso qodobadan in aad si talaabo talaabo ah ula kulantid ulana haasawdid, una soo jiidatid gabadha ku jecel.Ogow haddii aad ka xishootid haasaawahan hufan oo aad yeelan waydo isku kalsoonida dhexdiina taala ayaa meesha ka baxaysa.
ASTAAMAHA LAGU KALA GARTO JACAYLKA DHABTA AH IYO MIDKA DHALANTEEDKA AH
“Siday suurtogal u noqonaysaa in qof maydkiisu uu ql magaalo ku yaal muddadaa dheer dhexyaalo iyada oo aanay cidina ogaan oo nolosha dadka deegaankuna si caadi ah isaga socoto.” Sidaa waxa yidhi Dawn Primarolo oo ka tirsan Baarlamaanka England isaga oo arrintan xun oo u warramayey saxaafadda England.Dhacdadan ayaa dadka magaalada Bristol ku beertay naxdin, maxkamad ayaana baadhaysa sababta maydkani muddada dheer u yaalay qolka iyada oo aanay cidina ogaanin, arrintanina waxay dabboolka ka qaaday daryeel la’aanta iyo ka warhayn la’aanta dadka da’da ah ee ku dhaqan dalka Ingiriiska, taas oo laga cabsi qabo in qofkasta oo gaboobayba uu meel cidlo ah daryeel la’aan ugu dhinto.
DHIBAATOOYINKA SOO KALA DHEX GALA LAMAANAHA IS JECEL MARKA AY KALA FOGAADAAN(qormo xiiso leh) waxaan halkan ka salaamayaa maamulka ummada reer soomaaliland meel walba oo ay ku noolyihiin waxaan doonayaa in aan ka hadlo ama aan halkan ku soo bandhigo arin u baahan in aan kala taliyo dhamaan lamaanayaasha is jecel taas oo badanaa u keenta dhibaato dhanka lamaanayaasha is caashaqay waxaan in badan oo wakhtigan ah aan dareenaa in dhibaatooyinkaasi soo noqnoqdaan waayo hore ayaa loo yidhi jacaylkii kal dhoofa dhaayihii kala raaga dhibaataa dhex timaada” waxayna dhibtani badanaa soo wajahdaa marka labada lamaane ee mucaashiqiinta isku ahi ay kala fogaadaan iyada oo wakhti kala geeyey arooska iyo xidhiidhka meherka hortiis taas oo keenta in labada dhinacba shaki yimaado sidoo kale waxaa meesha yimaada saddexeeye iyo in gabadh walbaa iyo wiil walbaa ba iska dhaadhiciyaan in qof walba lamaane kale raadsanayo oo jacaylkiisii hore halkaa ku eegyahay hadii ay kala fogaadaan, sida in uu la socod iyo sheeko la sameeyo ama lasameyso gabadh ama wiil kuu doono ha noqdee dhalin yarada uu la kulmay ee uu meesha kula noolaaday iyga oo baray qof kale kana dhaadhacsiinaya in aan qof binu aadan ah laysku aamini karin oo leh dumar layskuma haleeyo ama ina rag aamin ma galo,balse labada lamaane ee kala fogaaday marnab isma weydiiyaan sida aad adigu daacad ugu tahay qofka aad jeclaatay ayuu isagaun daacad kuugu yahay waxaanad moodeysaa in mar walab qalbigiisa ay ka tan badan yihiin dadka uu markaas soo dhex galay maalmo yar gudahoodan waxaad arkaysaa qofkii oo jacayl cusub sameeyey isaga oo leh jacayl hore waan soo sameeyey laakiin waan ku guuleysan waayey !!!
ma kula tahay in qof qalbigiisu nadiif yahay oo jacaylkiisu in yar laabta kaga jiro in uu been ka sheegi karo jacaylkiisa dhabta ah oo uu odhan karo waan ku guuleysan waayey mise waxay kula tahay in uu odhanayo waxaan si xad dhaaf ah u jeclahay hal qof oo dunida ku nool hadan iga durugsan?
maxaa keenay in qofku jacaylkiisii dhabta ahaa ee u horeeyey uu been ka sheego isaga oo leh waa isoo maray jacayl laakiin wuu guursaday ama layga guursaday ama waan kala hadhnay iyo kelmado badan oo been ah oo uu doonayo in uu ku beer laxawsado qofka markaas uu doonayo barashadiisa.
runtii beentu waa mid aad u xun marka qofku kelmadaa leeyahayna ilaahay waa maqalayaa oo waxaa laga yaabaa in loo qaado oo dhab ay noqoto lagana guursado kadibna uu waali iyo isla hadal ku dhameysto waayo si walaba oo qofku uu u war wareego kama tago asal ahaantiisa jacaylkuna waa midka u horeeya ee dhabta ah in kasta oo dhalin yaradu jecel yihiin sidii ay marba qofka nafsadoodu doontay ula socon lahaayeen.
Akhriste walba oo akhrista maqaalkan waxaan weydiinayaa su’aasha ah maxaad u tidhaahdaa kelmadaha aan kor ku soo xusay marka aad gabadh la kulantid adiga oo qarinaya jacaylkaaga ama marka aad wiil la kulantid ? taasi maaha ilaa hada mid ay dadku garanayaan waxa sababa laakiin waa xanuun ku dhex jira dadka is jecel ilaa xanuunkaa daawo loo helana wax hagaagayaa oo jacayl la odhan karaa ma jiro waayo beentu waxay mar walba burburisaa nolosha qofka binu aadanka ah mana u ogolaato in uu nolol raaxo ah ku noolaado, badanaa qoysas badan oo jacayl lagu dhisay ayaa muddo yar gudahood burbura taasina waa been ka dhex dhalatay dadka is jecel dhexdooda taas oo sababtay in kalsoonidu burburto.
ma jiroqof binu aadan ah oo wax u hagaajin karo sidii la doonaayey laakiin waxaa loo baahan yahay in laysku dayo dadka is jecel ee kala dheeraaday wakhtiguna u saamixi waayey in ay hal meel ku wada noolaadaan waxaan mid walba uga digayaa kana codsanayaa in ay jacaylkooda dhabta ah been ka sheegaan iyaga oo door bidaaya qof cusub barashadii ama la socodkii taasi hadii ay suurto gasho oo qofku jacaylkiisa dhab ka sheego kalsooni,qaderin,kaladanbeyn,iyo is aaminid ayaa imanay nolol raaxo leh oo aan welwel iyo welbahaar lahayna way ku noolaanaya lamaanayaasha is jecel meel walba oo ay dunida kaga nool yihiin.
ugu danbeyntii waxaan ka raali gelinayaa qof walba oo akhrista maqaalkan hadii uu khalad u arko qoraalkaaan soo bandhigay waxaan leeyahay ka raali noqda waayo ilaahay ayaan wax khaldin.
JACAYL AAN IN BADAN DANAYNAAYAY BALSE AANAN HELIN
Dhacdadani oo ah mid si dhab ah u dhacda 2009-03-24 ayaa waxa ay ku dhacday wiil lagu magacaabo maxamed muqtaar.waxaana filaayaa in ay dhacdadani tahay mid aay ka wada heli doonaan dhamaan aqristayaasha wargeyska dhambaal Maxamed oo iiga waramay dhacdadaan ayaa waxa uu iigu war bixiyay sida tan:-( jaceylkeyga waxa uu ahaay mid soo taxnaa ilaa iyo mudo sedax sano ah sidaas darteed gabadhaas ayaa waxay aheyd gabadh aanu fasal wada dhigan jirnay oo markii hore si walaaltinimo ah isku baranay kolkii xigtayney aanu daalacnay dhaankaa iyo jaceylka. Anig oo cabiraaya ra’yi ahaanteyda waxaan aaminsanahay jaceylka ku bilaawda walaaltinimada ayaa ugu wanaagsan jaceylada Run ahaantii gabadhaasi waxa ay aheyd gabdhii ugu horeysay ee aan si dhab ah u jeclaado waxayna I tustay micnaha jaceylka iyo sharaftiisa jaceylkeeduna maahan mid aan si fudud ku iloobi karo sidaas waxaa yidhi maxamed. Asagoo hadalkiisa sii wato ayaa waxa uu intaasi ku daray markii aan in mudo ah wada soconay ayaa waxaan ku heshiinay guur kabacdina waxaan dhigaynay guur hoosahoosey ah nasiidaro se waxaa warkeena si hoose uga war helay abtigey waxa uuna igu waaniyay in aan arimahaan Farah kala boxo hadii kale aan kala kulmi doona arimo kale Intaas ka dib arinkaas oo ii cuntami waayay ayaa waxaan ula tagay jaceylkeygii una soo bandhigay arinkii iyo wixii aan abti isku odhanay. Wada hadal dheer ka dib waxaan isku afgaray in aan abti aa ku idhaahdo abti waan iska daayay afka lee ah ee aan uurka jirin. Arinkii kolkii aan u sheegay abti gadaal waa ay udhaafi weyday oo waxaa uu yidhi hadii ay run kaa tahay horteyda halagu kala tago indhaheygoo shanta ah.Halkaas ayaan ku kala baxnay aniga jaceylkeygii maryan, anagoo ku qanacsaneyn sida uu abti wax u waday laakiin waxaas oo dhan waxaa ka weynaayay amarka abti Isku soo wada xooriyoo saaxiibtey maryan waxaan ka wada hadli jirnay qadka anagoon sidi hore isku aheyn. Alle amarkiis maryan waxaa looga yeedhay Kenya oo uu aabaheed leen America ah uga diyaariyay Kenya deetana aan maqlay in ay uga sii gudubtay U.S.A Ilaa iyo iminka mahaayo meel aan kala xidhiido Hadaba akhristow hadii ay kugu dhici laheyd
Arinkaan oo kale hadii uu ku qabsado maxaad samayn lahayd?
HORTA JACAYL MA YAHAY WAX JIDHA?
haa oo wuu yahay wax jira basle waxaa badan dad aad iyo aad u tiro badan oo jacaylka ka aaminay xumaa sababta oo ah waxaa dhacday in dad badan oo leh jacayl ayaan isku qabnaa ay iskula kacaan wax yaabo aanu jcaylku caado iyo dhaqan u lahaan jirin waxaa beryahan danbe la arkaa in dhalin yaro fara badan marka jacaylka wax laga weydiiyo ay ku jawaabaan jacaylku waa in shahwada oo keliya layskula meel gaadho ilaa inta guur xalaal ah laga helayo balse taas waa been waayo miyeynu odhan karnaa jacayllkii cilmi iyo hodan kaas ayuu ahaa ama canbar iy ceebla,leyla iyo qays waxaa xasuus mudan in aynu wax ka taabano gabayadii cilmi boodhari uu ku tilmaamayey in uu qalbigiisu u jeedo hodan oo aanay idhisiisuba arkeyn dumarkan qaaqaawan ee la hor keenay isaga oo tuduc ka mid ah ku sheegay oo yidhi “hablayahaw halkii qoomaneyd baad i qabateene, qalbigaan bogsiinaayey baad qac iga siiseenee qosolkaa yar yari waa waxaad nagu qaldaysaane,qalbiguu wax yeelayaa naaska qaawaniye,in aan eebahay idin qatalin qariy laabtiina
run ahaantii cilmi wuxuu sheegayey in uu jacaylka hayaa uu yahay mid dhab aha kaas oo dad badan oo hada dunidan ku nool uu ahyo laakiin wuxuu cilim gabayo badan ku sheegay in dadka wax jecel ay aad uga dabeneeyaan qofka ay jeclyihiin hadii uu xumaan kula kaco iyo hadii uu wanaag kula kacaba, hadaba waxaan anigu qoraa ahaan odhan lahaa jacaylku waa uu jiraa waana soo jirey waligiiba waayo aduunkan hadii aanu jacayl jirin ilmuhuba naaska hooyadii caano kama heleen ee way iska dayrin lahayd jacaylkuna asala ahaan waa qof ilaahay kuu sakhiro oo wax walba oo aad u baahanatahay ku dadaalaya in uu ku siiyo wixii dhibtaada ahna doonaya iin uu kaa badnbaadiyo isaga oo aan xukunka illaahay gacanta ku hayn
alla badanaa oo badanaa inta jacyl daacad ahi soo maray oo ka faa’iidaysan waayey alla badanaa inta nacas aduunyadan ku nool oo qof si dhab ah u jecel agtiisa ka dheereeyey alla badanaa inta sarbeeb wax loogu sheegay ee qalbigooduna dareemi waayey
qofku jacayl waa sameyn karaa balse waxaa is weydiin mudan sidee u sameyn karaa sideese ugu guulaysan karaa isaga oo aan hanqalka u taageyn wax yaabaha ay dhalin ayrada ama dadka meesha kula noolo ku leeyihiin waxaa xaqiiqo ah in labadii jacayl dhab ah doonayaa ay jacayl sameyn karaan waxaana hubaal ah labadii doonay in ay noloshoda ciyaar iyo been ku maaweeliyaan in ay sameyn karaan iyaguna waxaanse anigu si dhab ah u aaminsanahay in mar walab uu jacaylka dhabta ahi guuleysto oo uu yahay ka horu marka iyo barwaaqada u horseeda qofka binu aadanka ah.
Dhaawacyada ka dhasha raaxadda sariirta.Waxa ay u eegtahay in wadanka England ay xaraarada raaxada sariirtu aad u badan tahay. Taas oo keenta dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaadha lamaanaha hawsha u gaarka ah ku guda jira. Hadba arintan ayaa waxa baadhitaan ka soo sameeyay Phonepiggybank.com si loo ogaado dhaawaca soo gaadha lamaanaha marka ay raaxaysanayaan oo xaraaradoodu meel sare marayso iyo sida ay u dhacaan.
Baadhitaan ka dhacay wadanka England oo waraysi laga qaaday 1000 qof ayaa waxa la waydiiyay noocyada galmada iyo dhaawacyada ka soo gaadha marka ay raaxaysanayaan. Baadhitaanka ayaa waxa lagu ogaaday in sanad walba boqolaal kun dhaawac ka soo gaadho xiliga ay raaxaysanayaan.
Hal kamid ah seddexdii qofba mid ayaa waxa ka soo gaadho dhaawac marka uu raaxaysanayo, laakiin waxa ay ogaadaan ama dareemaan dhaawaca maalinta dambe ee xaaladu degan tahay. Waliba dhaawaca ayaa qaar waxa uu gaarsiiyaa in ay maalinta dambe aadin shaqada oo ay guriga joogaan.
Hadaba meesha ugu khatarsan ee lagu sameeyo raaxada guurka ayaa ah kursiga qolka fadhiga, halkaas oo ah meesha dhaawaca ugu badani ka dhaco. Ilaa 10% ayaa ayaguna ka dhaca sariiraha marka ay ku jiraan xiliga jacaylku marayo meesha ugu saraysa.
Baadhitaanka ayaa waxa ka mid ahaa in la waydiiyay dadkii la waraysanayay alaabata ku jajabta xiliga la raaxaysanayo.
Alaabta u badan jajabka ayaa ah dhalooyinka wax laga cabo ee u dhow meesha ay ka dhacayso raaxada guurku. Laakiin ta sida caadiga jabtaa waa sariirta oo ah meesha jacaylku salka dhigo.
Afhayeen u hadlayay phonepiggybank.com ayaa waxa uu ku taliyay in ay haboon tahay in wadada laga sii faaruqiyo alaabta ku jajabi karta xiliga galmada, taas oo u keeni karta lamaanayaasha dhaawac.
Dhaawacyada kala duwan ee soo gaadha lamaanayaasha ayaa ah:
1. Muruq dhaawacma
2. Dhabar xanuun
3. Diirka oo ku xoqma ka dibna noqda sidii mid gubta.
4. Qoor xanuun
5. Jug ka soo gaarta jilbaha
suqa kala ibsiga ciyartoyda
BOGGA HORE NEWS